Nanie : Mety ho noho ny « influence » avy amin’ny dokam-barotra, izay tena manintona sy manaitra be. Misy ny vehivavy efa lasa zatra manao, tsy mety raha tsy « mi-se maquiller ». Eo koa ny fanirian’ny vehivavy sasany mba hiova kely amin’ny andavanandro. Fa misy koa ny vehivavy “complexée” dia saronana amin’ireny ny lesoka rehetra amin’ny tarehy.
Mialy : Marobe sady mety miovaova arakaraky ny olona ny antony : mety hanafenana ny tsy fahatomombanana amin'ny endrika, mety mikojakoja mba hisorohana ny fahanteran'ny hoditra… Manova be ny endrika ivelany ny fampiasana kojakoja amin’ny tarehy, ka mety efa lasa fahazarana ho an'ny vehivavy maro ny fampiasana azy.
Tsanta : Noho ny fisian'ny “réseau sociaux” de miparitaka be ilay izy. Hita ao daholo, ohatra, ny karazana “produits” ampiasain'ny “star” any ivelany, hany ka lasa liana ny olona. Misy rahateo ny mivarotra, na “vraie marque” io na tsy tena izy, dia lasa « accessible » amin’ny olona kokoa ilay izy.
Idealy : Ny antony mahatonga ny vehivavy maro mampiasa ny “produits de beauté” dia noho izy manampy amin'ny fikojana ny hoditra, ho fiarovana amin'ny fiovaovan'ny toetr’andro, ary indrindra manome hatsarana ny firafitry ny endriky ny olona iray. Manakona ireo tsy fahatomombanana rehetra eo amin'ny endrika, toy ny tasy, mony , panda... Manamarika ny mahavehivavy, manome ilay lafy “glamour" koa.